Chikumi 28, 2018 arun
Mastercard patents kusazivikanwa blockchain kwema
Financial mabasa makuru Mastercard akanga paakavapa akawanda matsva blockchain patents svondo rino.
Mumwe bvumidzwa ine hurongwa kuti hwezvekukurukurirana kusazivikanwa kwema pamusoro blockchain Network.
Maererano Mastercard, ari läpinäkyvä nature zvavo blockchain kwema ndiyo chigumburiso ichi zvemichina kuti tiitwe nokuda vachibhadhara zvezuva nezuva. Ndicho chokwadi kuti zvose mabhizimisi uye vatengi.
The bvumidzwa inoti:
"Saka, pane kudikanwa waishandiswa mhinduro hwokuti sangano tinogona kubatanidzwa kutengeserana apo kutengeserana mashoko anogona neawakatumirwa pachena kuitira kuzvidavirira uye kuvimba date, vachiri kupa kusazivana uye kutadza kwevamwe kuti chamber mumwe kwema kana rwakapetwa mashoko kutengeserana bato chinozivisa mashoko vaviri mapato ose kutengeserana kugutsa zvakavanzika zvinodiwa sangano rimwe mune kutengeserana. "
hurumende Korean inoratidza itsva crypto murau
The sangano chikuru nemari South Korea, Financial Services Commission akazivisa idzva crypto pamutemo yemibvunzo crypto exchanges.
Zviremera vari kuferefeta 3 zvikuru mabhanga Nonghyup, Hana Bank, uye Kookmin kuti vave kupa rwezvemabhengi kuzvipatara uye rakapotsa nyaya kuti crypto exchanges.
It kusvetuka kuti vatorwa havabvumirwi kushandisa yomunharaunda cryptocurrency exchanges kutenga nokutengesa digitaalinen zvinhu.
Hurumende anoda kudzivirira kunenge kwaita kuti "Kimchi Premium" by kusvibisa kufungira mari kufamba mu uye kubva cryptocurrency exchanges uye rwezvemabhengi Nhoroondo chokuita cryptoexchanges. The Kimchi Premium ari tama mazakwatira guta nechinangwa chokungoti kushandisa zvakanaka Exchange mu South Korea.
The nekubvirana ndiko policies itsva kufambisa legitimizing yomunharaunda cryptocurrency zvekutepfenyura.
Izvi anonzi danho rokutanga zviremera South Korea vakatsiva kurutivi zvakanaka yokudzora ari cryptocurrency pamusika munyika kokutanga munhoroondo.
Abu Dhabi anotangazve crypto murau & mutero framework
The regulator nokuti Abu Dhabi neInternational zvemari muzinda uye vakasununguka mapazi akaita yakatanga pamutemo uye mutero framework kuti Ndigopoteredza gwapa crypto mabasa zvaipiwa exchanges, zvaichengeta, uye nezvimwe vanozoshanda munharaunda.
The Financial Services pamutemo Authority of Abu Dhabi Global Market akaita aitaurawo kumativi nevatengi kudzivirira, njodzi ubatwa, Michina utungamiriri, kuburitsa / pachena, musika kushungurudzwa uye mutemo crypto twa exchanges.
Bithumb anonaya $ 14M of $ 31M yarasika Hack
South Korean cryptocurrency Exchange Bithumb inoti apora $ 14M of $ 31M yarasika okupedzisira mavhiki Hack.
The kambani collaborated pamwe exchanges yose kuti dzosa dzimwe mari, uyewo kuedza uye kudzivisa zvimwe nezvinhu.
The Exchange akati richaramba ayo kuturika kuti twa deposits uye withdrawals pachikuva.
Zvichitevera yokupedzisira chevhiki heist, 24-awa zvokutengeserana vhoriyamu musi Bithumb kwangoderera - kubva $400 miriyoni panguva nguva $124 miriyoni pari - mashoko anobva CoinMarketCap zvinoratidzwa.
Chat Anwendung Line kuti vomurova crypto Exchange
Line Corp., MuJapan chikuru mameseji basa, ari kuvhura cryptocurrency Exchange mwedzi unotevera.
The Exchange, akadana Bitbox, ichapa kutengesa pakati kupfuura 30 rakapotsa zviratidzo kusanganisira Bitcoin & Litecoin, asi kwete Fiat mari. The Website achava kuwanika 15 mitauro kuti vanoshandisa pose. Bitbox ucharaira munhu 0.1 muzana wokutengesera kubhadhara, kunze avo vari Japan uye US.
Line riri kushanda pachigadziko chemwenje-oga Mobile Anwendung nokuda Exchange. Line rave richishandiswa kuti rezenisi kuvhura imwe cryptocurrency Exchange muJapan.
Speini, Putugaro, Itari, France...
Hiram Czechowski anoti:
Chikunguru 22, 2018 pa 9:13 AM
Gunyana 7, 2018 pa 10:13 AM
Gunyana 8, 2018 pa 9:15 AM
Gunyana 9, 2018 pa 9:34 AM
Marcy Lister anoti:
Gunyana 14, 2018 pa 7:01 AM